६ वटा महानगरलाई संघले दिने १० अर्ब ९ करोड, पोखरापछि काठमाडौं, कुनले कति पाए बजेट ? - Arthatantra.com
६ वटा महानगरलाई संघले दिने १० अर्ब ९ करोड, पोखरापछि काठमाडौं, कुनले कति पाए बजेट ?
काठमाडौं । केन्द्र सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ६ वटा महानगरपालिकालाई १० अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा उक्त रकम केन्द्र सरकारबाट गएको हो । जसमा पुँजी तर्फ १ अर्ब ८ करोड १ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ ९ अर्ब १ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै समपुरक अनुदान तर्फ ३२ करोड १ लाख, समानिकरण तर्फ ३ अर्ब २४ करोड ९५ लाख, सशर्त तर्फ ६अर्ब ३२ करोड ११ लाख र विशेष अनुदान तर्फ २० करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघबाट प्रदेश र स्थानिय तहमा जाने बजेटमा पहिलो पोरखा महानगरपालिका रहेको छ भने दोस्रोमा काठमाडौं महानगरपालिका देखिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँको बजेट संघबाट पाएको छ । जसमा चालुतर्फ २ अर्ब १६ करोड ५० लाख र पुँजीगततर्फ ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समानीकरणतर्फ ६१ करोड ९१ लाख, सशर्ततर्फ १ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले संघबाट २ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमा चालु तर्फ १ खर्ब ९७ करोड ८१ लाख र पुँजी तर्फ ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै महानपरपालिकाले समानीकरण अनुदान तर्फ ७५ करोड २८ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १ अर्ब २६ करोड ९ लाख रुपैयाँ पाएको छ । विशेष र समपुरक अनुदान भने पाएको छैन ।
ललितपुर महानगरपालिकाले संघबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको छ । जसममा चालुतर्फ १ अर्ब ८ करोड ३० लाख र पुँजीगततर्फ १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान बापत ५० करोड ७४ लाख, सशर्त अनुदान बापत ५८ करोड ९४ लाख, विशेषतर्फ २ करोड ४९ लाख र समपुरक अनुदान बापत १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समानीकरणतर्फ ४६ करोड १ लाख, सशर्ततर्फ ७६ करोड ५१ लाख, विशेषअनुदानतर्फ ११ करोड ६२ लाख र समपूरकतर्फ ११ करोड २६ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब १८ करोड ५३ लाख र पुँजीगततर्फ २६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवको लागि संघबाट बिराटनगर महानगरपालिकालाई १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट गएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ४ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ १५ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
महानगरपालिकाले संघबाट समानीकरण अनुदानबापत ४० करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदान बापत ६८ करोड ६९ लाख र समपुरक अनुदान बापत १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले संघबाट १ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ५५ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ ८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघबाट महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदान बापत ४९ करोड ५५ लाख, सशर्त अनुदान बापत १ अर्ब १२ करोड २४ लाख र विशेष अनुदान बापत २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
वि.सं.२०७८ जेठ १७ सोमवार १३:३१ मा प्रकाशित
अघिल्लाे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने यस्ता छन् सरकारको ७ आधारहरु
पछिल्लाे कोरोनाले बढायो फेश सिल्डको माग, साढे ८ करोड बढीको आयात